Salaamanews » Duqeymaha diyaaradaha aan cidina wadin “Drones” oo daciifiyay awoodda Al-qaacidda
Home » Maqaallo, Warar Duqeymaha diyaaradaha aan cidina wadin “Drones” oo daciifiyay awoodda Al-qaacidda Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 4th, 2013 // Comments off	Qoraallo La Xiriira
Waraaq furan oo ku socota al-Zawahiri oo gilgishay aasaaska al-ShabaabKenyaanka oo ay haysato rajooyin sare, iyo caqabado waaweynKenya oo furtay xarun tiknolojiyo sare leh oo ka dhan ah argaggixisadaOmamo oo noqonaysa haweenaydii ugu horraysay ee madax ka noqota difaaca KenyaDhiibaatada haysata al-Shabaab oo sii fogaatay kadib markii ay dayriyeen al-Amriki
Duqeyn xooganeyd oo Khamiistii shalay waqti duhur ah ka dhacday wadanka Pakistan gaar ahan gobollada ku teedsan xadka Afghanistan, ayaa la sheegay in Mareykanku uu ku dilay hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Taliban, iyadoo isla weerarkaasina ay ku dhinteen sagaal kale oo ka tirsan xoogaga hubeysan.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo ka qeyb qaatay weerarka lagu bartilmaameedsaday kooxda Al-qaacidda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay Mullah Nazir, oo ah hogaamiyaha labaad ee kooxda Taliban.
Duqeynta oo meelo kala duwan ka dhacday ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madax muhiim u aheyd hogaanka kooxda islaamiga ah ee Taliban, waxaana la sheegay in lix ruux ay ku dhinteen duqeyn ka dhacday koofurta gobolka Waziristan, halka seddex kale ay ku dhinteen waqooyiga gobolkaasi.
Ragga weerarka lagu dilay oo ka koobnaa 9-sarkaal iyo hogaamiyahoodii Mullah Nazir, ayaa la sheegay inay kulan ka yeelanayeen sida iskaashi weerarro cusub ay u fulin lahaayeen islaamiyiinta Taliban iyo Xaqaani oo ka dagaallama Pakistan iyo Afghanistan.
Dhanka kale doqeyn kale oo ay diyaaradaha drones-ka ah ka fuliyeen dalka Yemen, ayaa la sheegay in lagu dilay hogaamiye ka tirsana Al-qaacidada gacanka carabta, oo lagu magacaabi jiray Moqbel Ebad Al Zawbah, waxaana weerarkaasi ku dhintay laba sarkaal oo kale.
Sirdoonka Mareykanka oo kaashanaya laamaha amaanka dalka Yemen, ayaa la sheegay In weerarkaasi ay fuliyeen, waxaana raggan lagu dilay, iyagoo ku jira gaarigooda oo marayay gobolka Bayda ee wadanka Yemen.
Saraakiisha Sirdoonka Mareykanka warbixin ay ku xaqiijinayaan dilka xubnaha Al-qaacidda ayaa soo muujisay in weerarka uu ahaa midkii ugu farsamada wanaagsanaa tan iyo howlgalka Al-qaacidda markuu ka billowday dalka Yemen.
Madaxweynaha Yemen, Cabdurabuh Mansor Al-hadi, ayaa soo dhaweeyay weerarkaan duqeynta ah oo ay fuliyeen diyaaradaha duuliya la’aanta ah ee Mareykanka leeyahay, wuxuuna ku baaqay in la beegsado xubnaha Al-qaacidda ee ka dagaallama wadankiisa.
Washington, ayaa ku dadaalaysa in ay kordhiso dagaalka ay kula jirto Al-qaacida, iyadoona sanadihii ugu dambeyey xoojisay weerarada diyaaraha aan cidina wadin ka fulinayaan wadamada ay Al-qaacidu ku dagaalanto.
Wadamada la sheego in mustaqbalka ay saameyn ku yeelan doonto Al-qaacidda oo ay ka sii jiri-karto nus qarniga soo socda waxaa kamid ah, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia, Syria, Mali, Maroco, Shiishaan, Lubnaan iyo Falastiin.
Prof. Maxamed Cumar Dalxa wuxuu qabaa in Al-qaacidda ay isku dayayso inay saameyso aduunka oo dhan, wuxuuna sheegay in siyaasadda Mareykanka mid u dhiganta tan ay kooxdu la soo baxeyso.
Soomaaliya, waxay kamid tahay wadamada ay ka jiraan laamaha Al-qaacidda, waxaana kooxda Al-shabaab oo horraantii sanadkii hore ku biirtay ururka Al-qaacidda loo diiwan galiyay inay kamid tahay liiska madoow ee Mareykanka.
Tags: maqaallo, warar « Qoraalkii HoreXaaladda Syria iyo Ciraaq oo murugsan kadib qaraxyo ruxay wadamadaasi	Qoraalka Xiga »Kooxda Shabaab oo ku dhawaad boqol macallin ku xirtay gobolka Galgaduud	Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »